Sekuvele isifo esisha eMlomo esokuthi noma uMasipala enayo indawo la kufanele kulahlelwe khona udoti, abantu sebekhetha ukulahla udoti noma kuphi. Abanye bawulahla ngisho ngaphandle kwendawo yokulahlela udoti, emasangweni noma eduze nje nomthangala ovalele la kulahlelwa khona udoti.
Okunye okungathi kubangela lokhu ukuthi izimpawu ezikhomba kwamdoti azicacanga kahle abanye bayalahleka bagcine bewulahla noma kuphi udoti. Okokuqala nje, uma uphuma eErmelo ngomgwaqo oya eHendrina, kunendlela engena emaphoyiseni aqeqesha izinja futhi iphinde iye nasemathuneni. Phakathi kwalezi izindlela, kukhona ekhuphukela ngakwamdoti kodwa yona iyalahla ngoba igudla umthangala bese abanye bangaliboni isange bese, ma bebona udoti olahlelwe ngaphandle futhi singekho nesixwayiso esithi bangawulahleli lapho udoti, bavele bawudilize.
Abanye bavele bawudedele eduze nje nemigwaqo ehamba eduze nakwamdoti, besekuthi labo abadobha udoti bewudayisa, bafike bachithe bathathe lokho abakufunayo bashiye kuhlakazekile.
Besekubakhona umhlaba owathengwa nguMasipala osengwaqweni oya eCarolina maduze nje nendawo yamapoyisa la abakala khona amaloli. Kulendawo abaningi besebe lahlela khona udoti okusobala ukuthi nabo bebekade belahleka. Umasipala waletha ugandaganda wavala la abekade bengena khona ngomhlabathi. Manje sebewulahlela nje eduze nongwaqo oya KwaMabuza kwazise alukho uphawu olubenqabelayo ukukwenza lokho.
Uma izulu lina, wonke lodoti uyaphihlika ungcolise nasemigwaqweni kunuke kabi!
“Ngifisa sengathi uMasipala anga faka izimpawu ezenele ezikhomba la kulahlelwa khona udoti kanye nalezo ezenqabela abantu ukulahla udoti noma kuphi” kusho omunye umhlali waseMlomo ongathandanga ukuvezwa.